Yakaburitsa vhezheni itsva yeiyo yakasarudzika yekutaurirana chikuva Hubzilla 4.6 | Linux Vakapindwa muropa
Yakaburitsa vhezheni itsva yeiyo yakasarudzika yekutaurirana chikuva Hubzilla 4.6
Mushure memwedzi mitatu yekukura, kuvhurwa kwe chikuva chekuvaka nzvimbo dzakasarudzika dzemagariro Hubzilla 4.6. Hubzilla ndiye chinangwa chezvese kutaurirana server inosanganiswa newebhu kutsikisa system uye nehurongwa hwepamutemo hwepamutemo.
hubzilla inotsigira yakabatana yechokwadi sisitimu kushanda sesocial network, maforamu, mapoka ekukurukurirana, Wiki, zvinyorwa zvinoburitsa masisitimu uye mawebhusaiti. Ini zvakare ndaisa dura rekuchengetera neWebDADAV rutsigiro uye isu tinoshanda nezviitiko nerutsigiro rweCalDAV.
Kubatana kwakabatana inoenderana neyakaremerwa Zot protocol, iyo inoshandisa iyo WebMTA pfungwa kupfuudza zvemukati kuburikidza neWWW mumatare akasarudzika uye inopa akati wandei mabasa akasarudzika, kunyanya, kujekesa kuguma-kumagumo kusimbiswa "Nomad Chitupa" mukati meZot network, pamwe nebasa rekuumbiridza kuitira kuona zvakanyatsofanana. mapoinzi ekupinda uye mushandisi dhata inoisa pane akawanda network node.
Kugovana nemamwe maFedivers networke inotsigira ActivityPub, Diaspora, DFRN, uye OStatus protocols.
1 Main nyowani maficha eHubzilla 4.6
1.1 Dhawunirodha Hubzilla
Main nyowani maficha eHubzilla 4.6
Mune iyi vhezheni nyowani, pamusoro pechinyakare zvinowedzerwa kumabasa aripo uye maficha, pamwe nekugadziriswa kwakawanikwa munguva yapfuura vhezheni, kuwedzerwa kutsva "Workflow" inowedzerwa chishandiso chekushandisa yekudyidzana system pakati pevatori vechikamu.
Pakati penzvimbo dzekushandisa kwayo, zvinofungidzirwa izvo inofanira kushandiswa senzira yekutevera bug, nepo mabasa ese akabatanidzwa epuratifomu huru achitsigirwa.
Iyo kuenderera kwenzira yekutama kuenda kune yazvino vhezheni yeZotVI protocol, iyo vhezheni vhezheni yacho iri kuvandudzwa sechikamu cheiyo yakabatana Zap chirongwa. Shanduko yakazara yakarongerwa vhezheni 5.0, iyo ichaburitswa mukota yekutanga yegore rinouya.
Wakawedzera iyo kunatsiridzwa rutsigiro rwebasa kuburikidza neCDN pamwe nerutsigiro rwakaganhurirwa rwekupinza SVG mifananidzo zvakananga mumaposita uchishandisa BBcode markup.
Zvinetso zvakatarwa zvekudyidzana neakawanda masevhisi anoshandisa iyo ActivityPub protocol akagadziriswa. Zvakare Iyo interface yeHubzilla yakagadziridzwa kuti ishande nemasaini asingatsigirwe "ziviso nomad" network.
Uye zvakare, kuziviswa kweiyi vhezheni nyowani kunoita kuti iratidze kuti iri kushanda nesimba kuendesa iyo Hubzilla chiitiko chiziviso sisitimu kune server-padivi chiitiko mashandiro, ayo anofanirwa kuwedzera kumhanya uye kuvimbika kwekutakura, pamwe nemabatirwo ekuderedza mutoro pa chinongedzo.
Uyewo, vanogadzira vanotaura nezvekutarisa sarudzo dzekufambisa main repository yeiyo purojekiti kubva ikozvino Framagit, nerutsigiro rweasina-purofiti sangano Framasoft, zvine chekuita nekuvharwa kwayo kwakarongwa pakati-2021.
Kuwedzeredzwa kweOpengraph kutsigira zvinyorwa, izvo zvino zvinosanganisira zvinyorwa.
Yakagadziriswazve kugadziridzwa uye kugadzirirwa kumhanya uye huwandu hwekushandisa zviwanikwa kune yekunze caching caching.
Yakagadziridzwa yekuyambuka-kutumira kweHubzilla zvinyorwa kune ekunze mapuratifomu uye enhau midhiya, kunyanya Twitter uye Livejournal.
Tsigiro yekutsvaga otomatiki kweCalDAV neCardDAV masevhisi.
Shanduro izere yeJapan yeiyo interface inosanganisirwa.
Kune avo venyu vanofarira kuwana iyo nyowani vhezheni yeHubzilla, vanogona kuzviita kubva chinotevera chinongedzo.
Kana kubva kune iyo terminal ne iwo unotevera kuraira:
Kana zvakadaro Hubzilla kuisirwa kuri nyore chaizvo nekuti, kana iwe ukaisa WordPress, Drupal, Jumla, nezvimwe. Kuisirwa Hubzilla kuchave nyore kwazvo. Izvo zvakakosha kutaura izvozvo Hubzilla yakagadzirirwa kuiswa pamaseva, kunyangwe yekiti kits, tunogona kutsigira LAMP kufambisa iyo yekuisa maitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Yakaburitsa vhezheni itsva yeiyo yakasarudzika yekutaurirana chikuva Hubzilla 4.6
VirtualBox 6.1 ikozvino yavapo, inouya nerutsigiro rweLinux 5.4
Chrome 79 inosvika pamwe nekuvandudzwa mumapassword uye kuzvitonga kwayo